Ubutofotofo bepool villa kufutshane neMae Phim Beach
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguUlla-Maija
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uUlla-Maija iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
IKharma 14 likhaya leeholide elinemigangatho emibini eLaem Mae Phim. Inamagumbi okulala ama-4, igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nebalcony kumgangatho ongaphezulu. Ikhitshi yesicwangciso esivulekileyo, indawo yokutyela, igumbi lokuhlala kunye nendlu yangasese zibekwe kumgangatho ophantsi kunye nokufikelela kwi-terrace kunye nephuli yangasese. Ithafa libonelela ngomthunzi, ichibi likulungele ukupholisa kwaye umgangatho walo ulungele ukuTanning.
I-villa ibekwe eSeabreeze Residence, indawo yokuhlala eyakhiwe ngo-2009. Kwindawo yokuhlala ephumelelayo, egcinwe kakuhle kwaye ekhuselekileyo, kukho indawo enkulu yedama kunye ne-pool yabantwana kunye nevenkile yokutyela ecaleni kwedama lokuqubha. Ukhuseleko lukwisiza 24/7. Indawo yokuhlala yaseSeabreeze ixatyiswa kakhulu ngelixa ukwiholide kwiiTropiki. Indawo yokuhlala ibekwe kwi-200m kude nolwandle!
Indawo yokuhlala imalunga neemitha ezingama-200 ukusuka kulwandle olumangalisayo lweekhilomitha ezi-5 ubude beSandy Mae Phim, umgama nje weeyure ezi-2 ukusuka eBangkok AirPort kwiPhondo laseRayong.
Umnini uyafumaneka ngexesha lokuhlala kwakho ngesaziso esifutshane nge-WhatsApp, ifowuni, i-imeyile kunye noMthunywa enceda kwaye ekunika iingcebiso zokuhlala kwakho.
Umbuki zindwendwe ngu- Ulla-Maija
Wamkelekile kwi-pool yethu ye-pool villa, indawo yokuphumla kwaye upholile kufuphi nolwandle!
Ukuhanjiswa okungundoqo kunye nokwaziswa kwendlu kunikwa yi-arhente yethu yentsebenziswano Quality Voyage. Iofisi yabo ingaphandle kwendawo yokuhlala kumgama nje ongamakhulu ambalwa eemitha. Banikezela ngeenkonzo ezifana neTeksi, iihambo zeeholide kwaye bancedise ukuba kukho imiba ekhoyo endlwini: izibane ezitshisiweyo kunye nezinye izinto ezinxulumene nokugcinwa.
Ukhuseleko kwindawo lusebenza 24/7 kwaye luyafumaneka kwimiba engxamisekileyo.
Ukuthuthwa ukuya endlwini kunokulungiswa ngumnini wendlu, i-Taxi drive esuka kwisikhululo seenqwelomoya saseSuvarnabhumi ithatha malunga neeyure ze-2.5 ngokuxhomekeke kwi-traffic.
Ukuhanjiswa okungundoqo kunye nokwaziswa kwendlu kunikwa yi-arhente yethu yentseb…